China PE-RT inopisa uye inotonhora pombi yemvura fekitori uye vagadziri | Shengyang
Kwakanakisa kudziya kwemafuta uye kwenguva refu kupisa kupisa
Iyo pombi ine yakanaka homogeneity uye yakagadzikana kuita. Kushanda mune inopisa mvura system inovimbisa makore makumi mashanu ekushandisa.
Kugadzirwa kwakanaka kwekuita uye hwakatsiga mhando
PE-RT pombi haidi kuti ipfuure nemuchinjiko-wekubatanidza maitiro, haidi kudzora muchinjiko-unobatanidza degree uye zvakafanana, pane mashoma maitirwo ekugadzira, chigadzirwa chakafanana, uye hunhu hwakagadzikana uye hwakavimbika. Flexible uye nyore kushandisa
Inogona kuve yakamoneredzwa uye yakakotama, iine diki yekukomberedza radius (Rmin = 5D), uye hairegedze. Kushushikana kuri muchikamu chakakotama kunogona kuzorodzwa nekukurumidza, kudzivirira kukanganisa kwepombi pakukotama nekuda kwekushushikana kwepfungwa panguva yekushandiswa. Kuvaka munzvimbo yakadzika tembiricha, hapana chikonzero chekutanga kupisa pombi, kuvaka kwakanaka, kudzikisa mutengo.
Yakanaka kukanganisa kuramba uye yakachengeteka chengetedzo
Iyo yakadzika-tembiricha brittleness tembiricha inogona kusvika 70 ° C, iyo inogona kutakurwa uye kuvakwa munzvimbo yakadzika-tembiricha; kugona kwayo kumira kwokunze kukanganisa kwakakwira zvakanyanya kupfuura mamwe mapaipi ekudzivirira kukuvara kwehurongwa hunokonzerwa nekuvakwa kwakaomarara.
Iko hakuna kusvibiswa kune zvakatipoteredza panguva yekugadzira, kuvaka uye kushandisa. Iyo tsvina inogona kudzokororwa uye ndeye zvigadzirwa zvakasvibirira.
Zvakanaka kupisa kupisa
Thermal conductivity ndeye 0.40W / mk, inokodzera pombi yekupisa pombi.
Kupisa-kunyauka kubatana, kuri nyore kugadzirisa
Hot-melt kubatana, PE-RT iri nani kwazvo kupfuura PEX munzira yekubatanidza uye kugadzirisa.